Hogaamiye Ciidan oo Ka Goostay Itoobiya Iskuna Dhiibay TPLF (Warbixin) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Hogaamiye Ciidan oo Ka Goostay Itoobiya Iskuna Dhiibay TPLF (Warbixin)
Last updated Oct 11, 2021 132 0
Wararka naga soo gaaraya dalka Itoobiya ayaa waxay sheegayaan in saraakiil ka tirsanaa ciidanka Itoobiya ee hogaaminayay dagaalka ka oogan gobolada Amxaarada ay dowladdu xirtay, kuwa kalana ay dishay halka qaarkood ay baxsadeen.
Tallaabooyinkan ayaa waxay ka dambeeyeen kadib khasaare xooggan oo dowladda Itoobiya kasoo gaaray dagaaladii dhacay 30 cisho ee lasoo dhaafay iyo siro baxsaday oo la tuhmayo in ay saraakiisha qaar u dusiyeen kooxda TPLF.
Dowladda Itoobiya waxay dishay tobaneeyo saraakiil ah kuwa kalana waa ay xir-xiran yihiin, sida ay soo tabiyeen siyaasiyiin xog ogaal ah oo ku sugan dalkaas. Sidoo kale saraakiisha qaar ayaa baxsaday kadib markii ay ka baqeen in la ciqaabo ama la dilo.
Mid kamid ah saraakiishu wuxuu isku dhiibay TPLF kaasoo lasoo bandhigay wareysi muuqaal ah oo lala yeeshay isagoo labisan dharkiisii ciidanka. Ninkan ayaa wuxuu ahaa abaanduulaha guutada 5-aad ee kibladoorka 52aad ee ciidamada Itoobiya.
Isdhiibiddiisa ayaa waxay timid kadib markii dagaal lagu jabiyay ciidamadii uu hogaaminayay lana ciqaabay, hase ahaateen markii uu soo dhameystay ciqaabta ayuu isku dhiibay Tigre. Isagoo niyad jab badan ka muuqdo ayaa waxa uu wareysiga ku billaabay sida tan: “Magacaygu waa Korneyl Dhababe Kasuum oo ka tirsan ciidanka Itoobiya, waxaan ahaa sarkaal ka mid ah ciidanka gGaaska 52-aad, gaar ahaan guutada 5aad amaanduulaheeda.
Mar la weydiiyay inta ay tiradoodu gaareyso ciidankii ku sugnaa jiidaha ay ka dagaalamayeen ayaa waxa uu sheegay guud ahaan iney ka koobnaayeen gaaska 11-aad, gaarka 30aad kan 12aad gaarka 52aad iyo hal guuto oo makaaniko ah ama wadatay gaadiidka dagaalka oo ay kaarayaasha kamid yihiin.
Wuxuu sheegay in gaadiidkoodii ay noqdeen wax la burburiyay iyo kuwa la qabsaday ayna yaryihiin inta u badbaaday. Intaa wuxuu ku daray inuu fashilmay qorshahoodii oo ahaa iney dagaal ka billaabaan aagga Gasheena oo ah meesha uu iska dhiibay islamarkaana gaaraan Walbiya oo ah meel istaraatiiji ah oo Tigre-gu heystaan.
Wuxuu xusay in khasaare ba’an uu gaaray afartii gaas ee ka dagaalamaysay aagga Gasheena, inkastoo uu xisay inuusan heyn tirakoob sax ah maadaama xaaladdu adkayd haddana wuxuu hoosta ka xariiqay inuu aad u badan yahay dhibka soo gaaray milatariga Itoobiya.
Akhbaaraadka kale ee cusub kana imanaya Itoobiya waxaa kamid ah in magaalada Adisababa lagu arkayo ciidamo iyo saraakiil garaadayaashoodii xiran oo ka dawarsanaya ama ka tuugsanaya suuqyada iyo wadooyinka.
Ciidankan tuugsanaya ayaa waxaa muuqaaladooda lasoo dhigay baraha Internetka kuwaasoo haba yaraatee aanan ka xishooneyn gacna hoorsiga, waxaana tani ay soo bandhigeysaa duruufta adag ee maanta heysata dowladda Itoobiya.
Ciidanka iyo saraakiisha tuugsanaya ayaa fasax ka heysta dowladda, waayo waa ciidankii ku dhaawacmay dagaalada mudada socda ee lala galay Tigre-ga. 40 kun oo ciidamo dhaawacyo ah oo ay dowladda Itoobiya ku daryeeleysay qeybo kamid ah dhulka Amxaarada ayaa intooda dhaqdhaqaaqi karta loo kala diray degaanadooda, kadib markii ay soo kordheen dhaawacyo hor leh, duruufta dhaqaalahana sii xoogeysatay.
Abiy Axmed wuxuu dhawaan ku goodiyay inuu isku diyaarinayo dagaal kama dambeys ah oo uu Tikrega la galo, halka Tigre ay ku goodiyeen iney iyaguna aad u diyaar garoobayaan.